Ireo boky 1930 izay mamerimberina androany
Haisoratra Top Picks Lists
Famakiana ny taona 1930 ho an'ny haisoratra toy ny lasa na ny fandresena
Ireo taona 1930 dia nahita ny politikan'ny fiarovana, ny foto-pisainana mitokana, ary ny fiakaran'ny fitondrana tsy refesi-mandidy maneran-tany. Nisy loza voajanahary nanampy trotraka ny fifindra-monina. Ny Depression Lehibe dia nanapaka lalina ny toe-karena amerikana ary nanova ny fomba fiainan'ny olona isan'andro.
Maro amin'ireo boky navoaka nandritra io vanim-potoana io no mbola manana toerana ambony ao amin'ny kolontsainay amerikana. Ny sasany amin'ireo lohateny manaraka dia mbola ao amin'ny lisitry ny bestseller; Ny hafa dia navoaka vao haingana. Maro amin'izy ireo no mitoetra ho fenitra ao amin'ny fandaharam-pampianarana Amerikana.
Jereo ny lisitr'ireo lohateny sivy fanta-daza avy amin'ny mpanoratra britanika sy amerikana izay manolotra fandinihana ny lasa na izay mety hanampy antsika hanome fanombohana, na fampitandremana ho an'ny hoavintsika.
"Tany tsara" (1931)
Ny tantara nosoratan'i Pearl S. Buck "The Good Earth" dia navoaka tamin'ny taona 1931, taona maromaro tao amin'ny "Depression Depression", raha maro ny Amerikanina no nahafantatra tsara ny fahasahiranana ara-bola. Na dia toerana kely fambolena sy fiompiana tany Chine tamin'ny taonjato faha-19 aza, ny tantaran'i Wang Lung, ilay mpamboly Sinoa miasa mafy, dia nahafantatra tsara ny mpamaky. Ankoatra izany, nisafidy ny Amerikanina isan-karazany ny safidin'i Buck izay i Lung ho mpilalao sarimihetsika, olon-tsotra Everyman. Ireo mpamaky dia nahita ny ankamaroan'ireo lohahevitry ny tantara - ny tolona vokatry ny fahantrana na ny fitsapana ny fialam-bolon-koditra - dia hita taratra eo amin'ny fiainany manokana. Ary ho an'ireo izay mandositra ny Dust Bowl an'ny Midwestwest, ny tantara dia nanolotra loza voajanahary mitovy: mosary, tondra-drano, ary valala ny valala izay namotika ny vokatra.
Teraka tany Amerika i Buck dia zanakavavin'ny misiônera ary nandany taona maro nandritra ny fahazazany tany ambanivohitr'i Shina. Tsaroany fa fony izy nihalehibe, dia izy foana no vahiny ary antsoina hoe "devoly avy any ivelany". Nampahafantarin'ny tsiaro azy ny fahatsiarovany momba ny fahazazany tao anatin'ny kolontsain'ny tantsaha sy ny fanoherana ara-kolotsaina izay tratran'ny tranga lehibe tamin'ny taonjato faha-20 an'i Shina , anisan'izany ny fanoherana ny Boxer tamin'ny taona 1900. Ny fiction azy dia maneho ny fanajany ireo tantsaha miasa mafy sy ny fahaizany manazava ny fomba amam-panaon'ny Shinoa, toy ny tongotra, ho an'ny mpamaky Amerikana. Ilay tantara dia nandeha lavitra ho an'ny fanararaotana ny vahoaka Shinoa ho an'ireo Amerikana, izay nanaiky an'i Shina ho mpiady World War II taorian'ilay fipoahana tao Pearl Harbor tamin'ny taona 1941.
Nahazo ny loka Pulitzer ny tantara ary nahatonga ny Buck ho lasa vehivavy voalohany handray ny loka Nobel ho an'ny Literatiora. Ny "Tany tsara" dia mendri-piderana amin'ny fahaizan'i Buck maneho ny tontolon'ny zava-drehetra toy ny fitiavan'ny tanindrazana. Izany no antony iray ahafahan'ny mpianatra any afovoan-tanàna na any amin'ny ambaratonga ambony amin'ny tantara an-tsary na ny "The Big Wave" ao amin'ny anthologies na ao amin'ny kilasin'ny literatiora manerantany.
"Tontolo Vaovao mandoza" (1932)
Aldous Huxley dia mendri-piderana ho an'ity fandraisana anjara amin'ny literatiora dystopian ity, karazana iray izay nanjary nalaza kokoa tato anatin'ny taona vitsivitsy. Huxley no mametraka ny "Tontolo Vaovao mandresy" amin'ny taonjato faha-26 rehefa mieritreritra fa tsy misy ady, tsy misy fifanoherana, ary tsy misy fahantrana. Ny vidin'ny fandriampahalemana, na izany aza, dia ny maha-izy azy manokana. Ao amin'ny dystopia an'i Huxley, tsy manana fihetseham-po manokana na hevitra manokana ny olombelona. Ny fanehoan'ny zavakanto sy ny fanandramana hanatratrarana hatsarana dia melohina ho mampikoropaka ny Fanjakana. Mba hahatratrarana ny fanarahan-dàlana dia alefa ny "soma" zava-mahadomelina mba hanesorana ny fiara na ny famoronana ary hamela ny olona ao anatin'ny fahafinaretana mandrakizay.
Na ny fananganana olombelona aza dia voafehy, ary ny embryos dia mihosotra amin'ny fametavetana amin'ny anton-tsaratr'izy ireo, satria efa voalahatra ny sata mifehy azy. Aorian'ireo "tsimok'aretina" avy amin'ireo fitoeran-boahary izay ahitan'izy ireo ny fotony, dia ampiofanina amin'ny anjara asany izy ireo (ankapobeny).
Nandritra ny tantaran'ity tantaran'i Huxley ity dia nampiditra ny toetran'i John the Savage, olona iray izay nitombo teo ivelan'ny fiarahamonina tamin'ny taonjato faha-26. Ny tantaram-piainan'i John dia mampiseho ny fiainana ho fantatry ny mpamaky bebe kokoa; Fantany ny fitiavana, ny fahaverezana ary ny fanirery. Izy no olona misaina izay namaky ny tantaran'i Shakespeare (izay nahazo ny anaram-boninahitra ny anarany.) Tsy misy amin'ireto zavatra ireto dia sarobidy amin'ny dystopia an'i Huxley. Na dia nanintona an'ity tontolo voafehy ity aza i John, dia tsy ela dia nanjary diso fanantenana sy maharikoriko ny fihetseham-pony. Tsy afaka miaina amin'izay heveriny ho teny maloto izy, raha ny marina, tsy afaka miverina any amin'ny tany mahantra izay niantsoany taloha izy.
Ny tantara nosoratan'i Huxley dia natao hanesorana ny fiarahamonina Britanika izay tsy nahasakana ny fatiantoka mahatsiravina nataon'ny WWI ny sampam-panabeazana ara-pivavahana, ara-barotra ary ny governemanta. Nandritra ny androm-piainany dia nisy zatovolahy iray nodimandry tany amin'ny toeram-pandrosoana nandritra ny andian- jiolahy (1918) namono sivily maromaro mitovy. Anatin'ity famoahana ny ho avy ity, Huxley dia maminavina fa ny fifehezana ny governemanta na ny orinasa hafa dia mety hanome fiadanana, fa inona no mety hitranga?
Mbola malaza io tantara io ary ampianarina amin'ny ankamaroan'ny kilasy ara-literatiora dystopian ankehitriny. Ny iray amin'ireo tantara malaza amin'ny tantaram-pitiavan'ireo olon-dehibe dia ny Aldous Huxley, anisan'izany ny "The Hunger Games", " The Series Divergent", sy ny "Maze Runner Series".
"Famonoana olona tao amin'ny katedralina" (1935)
Ny "famonoana ao amin'ny katedraly" nataon'ny poeta amerikana TS Eliot dia tantara an-tsehatra iray izay nivoaka voalohany tamin'ny taona 1935. Ao amin'ny Katedralin'i Canterbury tamin'ny Desambra 1170, "Ny famonoana ao amin'ny katedralina" dia mirakitra tantara mifototra amin'ny martirydom of St. Thomas Becket, arsevekan'i Canterbury.
Anatin'ity fanovozan-kevitra ity, Eliot dia mampiasa ny fomba fitenin'ny Grika Klasika izay ahitana vehivavy mahantra ao Canterbury Medieval mba hanomezana valinteny sy hanosehana ilay tetika. Ny tononkalo dia mitantara ny fahatongavan'i Becket avy amin'ny sesintany fito taona taorian'ny nanenjehana an'i King Henry II. Manazava izy ireo fa ny fahadalan'i Becket dia manakorontana an'i Henry II izay miahiahy momba ny fiantraikan'ny fiangonana katolika ao Roma. Avy eo izy ireo dia manolotra ireo fifandirana efatra na fakam-panahy izay tsy maintsy hanoherin'i Becket: fahafinaretana, hery, fankasitrahana ary maritiora.
Rehefa nanome torohevitra marainan'ny Krismasy i Becket, dia manapa-kevitra ny hanao fihetsika mahakivy ny mpanjaka ny mpilalao efatra. Mandresy lahatra ilay Mpanjaka miteny (na mutter) hoe: "Tsy hisy handao ahy amin'ity pretra mampihetsi-po ity ve?" Niverina tany Becket indray ireo mpilalao tao amin'ny katedralina. Ny lahateny izay mamarana ny lalao dia atolotry ny mpilalao tsirairay, izay samy manome ny anton'ny famonoana ny Arsevekan'i Canterbury ao amin'ny katedralina.
Lahateny fohy, indraindray ny mpampianatra dia ampianarina ao amin'ny literatiora Advanced Placement na amin'ny lahatsoratry ny fampisehoana any amin'ny lisea.
Vao haingana dia noraisina ny lalaovina rehefa nanondro ny talen'ny FBI James Cooky ny famonoana an'i Becket, nandritra ny 8 Jona 2017 , ny fijoroana vavolombelona tamin'ny Kaomity Sampan-draharaham-panjakana. Taorianan'ny Senatera dia nanontany i Angus King hoe: "Rehefa milaza ny zavatra iray tahaka ny hoe 'manantena aho' na 'manoro hevitra aho' na 'maninona anao', ny filoham-pirenen'i Etazonia ... dia raisinao ho toy ny torolàlana ho an'ny fanadihadiana ny National teo aloha Mpanolo-tsaina momba ny fiarovana Michael Flynn? "Namaly i Comey hoe:" Eny. Eo amin'ny sofiko izy io toy ny hoe: 'Tsy hisy handao ahy amin'ity pretra mampihetsi-po ity ve?' "
Iray amin'ireo mpanoratra fanta-daza indrindra amin'izao fotoana izao ny JRR Tolkien izay namorona tontolo nofinofy izay nitana ny toeram-ponenan'ny hobbits, orc, elves, olona ary mpikirakira izay mamaly amin'ny peratra mahagaga. Ny prequel to "The Lord of the Rings -Middle Earth Trilogie," mitondra ny lohateny hoe "The Hobbit" na "Any and Back Again" dia navoaka voalohany tamin'ny bokin'ny ankizy tamin'ny taona 1937. Ity tantara ity dia mitantara ny fikarohan'ny episodika an'i Bilbo Baggins, miaina amin'ny fampiononana any Bag End izay nokarohin'ny Wizard Gandalf mba handehanana aminà traikefa miaraka amina 13 sivily mba hamonjena ny harenany amin'ny dragona marauding antsoina hoe Smaug. Bilbo dia hoby; Izy dia kely, miondrika, eo amin'ny antsasaky ny habetsahan'ny olona, ​​miaraka amin'ny rantsantongotra mirefotra ary fitiavana ny sakafo tsara sy ny fisotroana.
Miaraka amin'ny fikarakarana izay ahitàny an'i Gollum, sangisangy, faninkanam-bolo izay manova ny hoavin'i Bilbo ho tompon'antora-pandrika mahery. Taorian'io, tamin'ny fifaninanana an-tsokosoko, ny sambo Bilbo Smaug dia nanambara fa azo amboarina ny fitaovam-piadiana ao am-pony. Misy ady, famadihana ary fifanarahana natao mba hahatongavana any amin'ny tendrombohitr'andriamanitra volamena. Taorian'ilay fisintonana dia nody i Bilbo ary naleony ny orinasan'ny dwarves sy elves ho any amin'ny fiarahamonina hobbit kokoa izay hajaina kokoa amin'ny fizarana ny tantaran'ny fiainany.
Nanoratra momba ny tontolon'ny fantasy tany afovoan-tany i Tolkien, nitondra loharano maro, anisan'izany ny Mythology Norse , ny polymath William Morris, ary ny fiteny anglisy voalohany, "Beowulf."
Ny tantaran'i Tolkien dia manaraka ny karazan-tsarin'ny ezaky ny mpilalao iray, dian-tongotra 12 dingana izay ny fihodinan'ny tantara avy amin'ny " The Odyssey" ho an'ny "Star Wars ." Amin'ny karazana aretina toy izany, dia misy maoderina tsy sariaka mivezivezy any ivelan'ny faritra mampionona ary miaraka amin'ny fanampian'ny mpanoro hevitra sy ny elixir mahagaga, dia miatrika fanamby maromaro mialohan'ny hiverenany any an-trano hendry kokoa. Ny famoahana horonantsary vao haingana an'ny "The Hobbit" sy "The Lord of the Rings" dia nampitombo ny fanorenan'ny fanoratana fotsiny ihany. Ireo mpianatra any amin'ny sekoly ambaratonga faharoa sy amin'ny ambaratonga ambony dia azo omena io boky io any am-pianarana, saingy ny tena fitsapana ny lazany dia ny mpianatra tsirairay izay nisafidy ny hamaky ny "The Hobbit" araka ny filazan'i Tolkien ... ho an'ny fahafinaretana.
"Ny masony niambina an'i Jehovah" (1937)
Ny tantara nosoratan'i Zora Neale Hurston "Ny mason'izy ireo dia manantena an'Andriamanitra" dia tantaran'ny fitiavana sy ny fifandraisana izay manomboka amin'ny sary, fifanakalozan-kevitra eo amin'ny namana roa izay mandrakotra ny zava-nitranga nandritra ny 40 taona. Ao amin'ny valiny, nitantara ny fitiavany i Janie Crawford ary mitoetra amin'ny karazana fitiavana efatra izay niainany nandritra ny fotoana lava. Ny endri-pitiavana iray dia ny fiarovana azony tamin'ny renibeny, raha ny iray hafa no fiarovana azony tamin'ny vadiny voalohany. Ny vadiny faharoa dia nampianatra azy ny amin'ny loza ateraky ny fitiavan-tena, raha ny fitiavan 'ny fiainan'i Janie kosa dia ny mpiasa migadra fantatra amin'ny anarana hoe Tea Cake. Mino izy fa nanome azy ny fahasambarana izay tsy mbola nananany hatrizay mihitsy izy, saingy nampalahelo azy dia nalain'ny alika masiaka nandritra ny rivo-doza. Rehefa voatery nitifitra azy ho fiarovan-tena izy taorian'izay dia tsy navotsotra tamin'ny famonoana azy i Janie ary niverina tany an-tranony tany Florida. Rehefa nitantara ny fikarakarany ny fitiavana tsy misy fepetra, dia namarana ny dian'izy ireo izay nahita ny "fanasan-damba avy amin'ny tovovavy iray manan-danja, nefa tsy misy feo ary tsy misy dikany amin'ny vehivavy miaraka amin'ny rantsan-tanany amin'ny firotsahany ny anjarany manokana."
Hatramin'ny nanontana azy tamin'ny taona 1937, dia nanjary nalaza ny tantara, ho ohatra ho an'ny literatiora Afrikana Amerikana sy ny literatiora feminista. Na dia izany aza, ny valinteny voalohany momba ny famoahana azy, indrindra fa ireo mpanoratra mpanoratra ny Harlem Renaissance dia tsy dia tsara loatra. Nolazain-dry zareo fa raha te-hanohitra ny lalànan'i Jim Crow dia tokony hamporisihana ny mpanoratra Afrikana-Amerikana hanoratra amin'ny alàlan'ny fandaharana Uplift mba hanatsarana ny sarin'ireo Afrikana Afrikana ao amin'ny fiarahamonina. Nahatsapa izy ireo fa tsy niady mivantana tamin'ny lohahevitra momba ny hazakazaka i Hurston. Ny valintenin'i Hurston dia,
"Satria nanoratra tantara aho fa tsy fifanarahana momba ny fiarahamonina sosialy. [...] Tsy nieritreritra ny momba ny hazakazaka aho, fa raha ny hevitr'ireo olona ihany ... Tsy mahaliana ahy ny olana ara-tsosialy, fa izaho Izaho dia liana amin'ny olan'ny tsirairay, ny fotsy sy ny mainty. "
Ny fanampiana ny hafa hahita ireo olan'ny olona ankoatra ny hazakazaka dia mety ho dingana lehibe amin'ny fanoherana ny fanavakavaham-bolonkoditra ary mety ho antony iray ampiasana izany boky izany matetika any amin'ny ambaratonga ambony avo lenta.
"Ny totozy sy ny olombelona" (1937)
Raha tsy nanolotra afa-tsy ny anjara birik'i John Steinbeck ireo taona 1930, dia mbola ho afa-po amin'ity litera folo taona ity ny kanôna. Ny novembre 1937 "Ny totozy sy ny lehilahy" dia manara-dalana an'i Lenny sy George, mpivady roa izay manantena ny hijanona ela any amin'ny toerana iray ary hahazo vola ampy hividianana ny toeram-pambolena manokana ao Kalifornia. Lennie dia miadam-pahaizana ara-tsaina ary tsy mahafantatra ny heriny ara-batana. George dia naman'i Lennie izay mahafantatra ny herin'i Lennie sy ny fetrany. Ny fijanonan'izy ireo ao amin'ny trano fonenana dia mampanantena fa amin'ny voalohany, saingy taorian'ny nahafatesan'ny vadin'ny mpiadina dia voatery nandositra izy, ary voatery nanao fanapahan-kevitra mahatsiravina i George.
Ireo hevitra roa izay miorina amin'ny asan'i Steinbeck dia nofy sy fanirery. Ny nofinofy momba ny fambolena bitro dia mitazona ny fanantenana velona ho an'i Lennie sy i George na dia kely aza ny asa. Manana fahatsapana ho irery ny saha hafa rehetra, anisan'izany i Candy sy Crooks izay mitombo amin'ny fanantenana ao amin'ny toeram-piompiana bitro.
Ny novambra Steinbeck dia natsangana ho toy ny script ho an'ny toko telo amin'ny toko roa tsirairay. Namolavola ny sombiny tamin'ireo traikefa niarahany niasa tamin'ireo mpiasa mpifindra monina tao amin'ny Lohasahan'i Sonoma izy. Izy koa dia naka ny lohateny avy amin'ny tononkalo Scottish Burn Robert Burn ao amin'ny tononkalo "To a Mouse" amin'ny fampiasana ilay andian-teny adika:
"Ny tetik'asa tsara indrindra napetraka amin'ny totozy sy ny lehilahy / matetika dia mandeha tsinontsinona."
Matetika ny boky dia voarara noho ny antony maro samihafa, toy ny fampiasana fiteny tsy fantatra, fiteny fanavakavahana na fampiroboroboana ny euthanasia. Na eo aza ireo fepetra ireo, ny lahatsoratra dia safidy malaza any amin'ny ambaratonga ambony. Horonantsary sy horonantsary fanangonan-tsarimihetsika mitondra an'i Gary Sinise an'i George sy i John Malkovich satria Lennie dia sangan'asa mahafinaritra ho an'ity novela ity.
"Ny Mofon'aina" (1939)
Ny faharoa amin'ireo asa lehibe nataony nandritra ireo taona 1930, "The Grapes of Wrath" dia ny fikasan'i John Steinbeck hamorona endrika fitantarana vaovao. Niara-nidinika ny tantaram-pirazanana momba ny Dust Bowl miaraka amin'ny tantaram-pianakaviana Joad izy rehefa nandao ny toeram-pamboleny tao Oklahoma izy ireo mba hitady asa tany Californie.
Eo am-pandehanana dia mahita ny tsy rariny amin'ny manampahefana sy ny fangorahana avy amin'ny mpifindra monina hafa ny Joads. Noteren'ireo tantsaha mpiara-miasa izy ireo saingy nomena fanampiana avy amin'ireo masoivoho New Deal. Rehefa miezaka ny hampiray ny mpifindra monina amin'ny karama ambony i Casey namany, dia maty izy. Ho setrin'izany, novonoin'i Tom ny mpanafika an'i Casey.
Tamin'ny fiafaran'ilay tantara, sarotra be ny famoizana ny fianakaviana nandritra ny dia avy tany Oklahoma; Ny fahafatesan'ny patriarka fianakaviany (Dadabe sy Bebe), ny zanaka-naterin'i Rose, sy ny sesitany an'i Tom dia samy nandray anjara tamin'ny Joads.
Ireo sehatr'ireo nofinofy ao amin'ny "Of Tweets and Men", indrindra ny Amerikana Dream, dia manapaka ity tantara ity. Fampiasana - ny mpiasa sy ny tany - dia lohahevitra lehibe hafa.
Talohan'ny nanoratana ilay tantara, no nilazan'i Steinbeck hoe,
"Tiako ny hametraka ny marika amin'ny henatra amin'ny gadra manirery izay tompon'andraikitra amin'izany (ny Great Depression)."
Ny fiaraha-miasany amin'ny lehilahy miasa dia miharihary amin'ny pejy rehetra.
Steinbeck dia namolavola ny tantaran'ilay tantara avy amin'ny lahatsoratra maromaro nosoratany ho an'ny The San Francisco News izay mitondra ny lohateny hoe "The Gypsies" izay naharitra telo taona talohan'izay. Ny Grapes of Wrath dia nahazo mari-pankasitrahana maro, anisan'izany ny Loka Nasionaly momba ny boky sy ny loka Pulitzer ho an'ny famoronana. Matetika no lazaina ho antony nahatonga an'i Steinbeck nomena ny loka Nobel tamin'ny 1962.
Ny tantara dia matetika ampianarina amin'ny kilasy amerikana na kilasin'ny literatiora fampiofanana. Na eo aza ny halavany (464 pejy), ny ambany dia ambany dia ambany amin'ny salan'isa rehetra amin'ny sekoly ambaratonga faharoa.
"Ary dia tsy nisy na inona na inona" (1939)
Ao anatin'io mistery Agatha Christie mendrika indrindra io dia olona vahiny folo, izay toa tsy misy ifandraisany, no asaina amin'ny tranobe nosy iray any amin'ny morontsirak'i Devon, Angletera, avy amin'ny UN-Owen. Mandritra ny sakafo hariva dia misy fanambarana milaza fa ny olona tsirairay dia manafina tsiambaratelo meloka. Fotoana fohy taorian'izay, ny iray amin'ireo vahiny dia hita novonoin'ny cyanide iray mahafaty. Rehefa misakana ny olona tsy hivoaka ny toetr'andro ratsy, dia misy fikarohana iray milaza fa tsy misy olona hafa eto amin'ny nosy ary tapaka ny fifandraisana amin'ny tanibe.
Ny tebiteby dia mamirapiratra ho an'ny tsirairay avy ny mpitsidika dia mihaona am-pahamarinana. Navoaka tamin'ny lohateny hoe "Tenin'ny Indianina Indianina" io tantara io satria ny rhyme iray ao amin'ny garderie dia mamaritra ny fomba isian'ny vahiny tsirairay ... na ... hovonoina. Mandritra izany, ireo olona vitsy sisa tavela dia manomboka miahiahy fa eo anivon'izy ireo ilay mpamono olona, ​​ary tsy afaka mifampatoky izy ireo. Iza no mamono ny vahiny ... ary nahoana?
Ny litera miafara (heloka bevava) amin'ny literatiora dia iray amin'ireo karazana fivarotana lehibe indrindra, ary i Agatha Christie dia fantatra ho iray amin'ireo mpanoratra mistery lehibe indrindra eran-tany. Ny mpanoratra britanika dia fantatra amin'ny tantara noforonina 66 sy famoriam-bola fohy. "Ary avy eo dia tsy misy" ny iray amin'ireo anaram-bosotra malaza indrindra, ary tombanana ho isan'ny 100 tapitrisa ny kopia amidy hatramin'izao dia tsy olona tsy misy saina.
Ity fifantenana ity dia atolotra any amin'ny sekoly ambaratonga faharoa sy amin'ny avo amin'ny sokajin-karazana génie voatokana ho an'ny mistery. Ny haavon'ny lahatsary dia ambany (ny Lexile 510-taona 5) ary ny fihetsika tsy mitsahatra dia mitazona ny mpamaky hiditra sy hisaina.
"Johnny nahazo ny heriny" (1939)
"Johnny Got His Gun" dia tantara nosoratan'ilay mpanao horonantsary Dalton Trumbo. Manana tantara malaza hafa momba ny ady amin'ny ady izay mahita ny fiaviany amin'ny horohoron'ny WWI. Ny ady dia nalaza noho ny famonoana indizena tao amin'ny kianjan'ny ady avy amin'ny basy sy ny grenady sarda izay nandao ireo hady feno vatomizana.
Voalohany navoaka tamin'ny taona 1939, "Johnny Got His Gun" indray no nanjary nalaza ho 20 taona taty aoriana ho toy ny tantara manohitra ny ady ho an'ny ady tany Vietnam. Ny tetika dia tena tsotra, Amerikana, miaramila amerikana, Joe Bonham, no manohana maratra maro manimba izay mitaky azy ho tsy afa-manoatra ao amin'ny fandrianany. Lasa tsapany tsikelikely fa nopotehina ny sandriny sy ny tongony. Tsy afaka hiteny, hijery, handre na handroka izy satria nesorina ny tarehiny. Tsy misy idirany, mipetraka eo amin'ny lohany i Bonham ary misaintsaina ny androm-piainany sy ny fanapahan-kevitra nialany tany amin'io fanjakana io.
Ny Trumbo dia nametraka ny tantara tamin'ny fihaonam-piainana niainana niaraka tamin'ny miaramila kanadiana mahatsiravina. Ny tononkalony dia naneho ny finoany ny vidin'ny ady amin'ny olona iray, toy ny hetsika tsy lehibe sy mahery fo ary ny sorona ataon'ny tsirairay ho an'ny hevitra iray.
Mety toa tsy mahagaga izany, noho izany, ny Trumbo dia nanakana ny famoahana dika mitovy ny boky nandritra ny Ady Lehibe Faharoa sy ny Ady Koreana. Nolazainy taty aoriana fa fahadisoana io fanapahan-kevitra io, saingy natahorany fa mety hampiasaina tsy araka ny tokony ho izy ilay hafatra. Ny finoany ara-politika dia nitokana, saingy rehefa niditra ny Antoko Komonista tamin'ny taona 1943 izy dia nisarika ny sain'ny FBI. Ny asany tamin'ny maha-mpilalao horonantsary azy dia nijanona tamin'ny 1947 fony izy iray tamin'ireo Tenan'i Hollywood izay tsy nety hijoro vavolombelona talohan'ny House on Un-American Activities Committee (HUAC) . Nanadihady ny fiantraikan'ny Kominista tao amin'ny indostrian'ny sarimihetsika izy ireo, ary i Trumbo dia natsofoka tao anatin'io orinasa io hatramin'ny taona 1960, raha nahazo alim-pandaharana momba ny horonantsary momba ny horonan-tsarimihetsika Spartacus nahazo loka izy, ary koa momba ny miaramila iray.
Ny mpianatra ankehitriny dia afaka mamaky ilay tantara na mety hitarika toko vitsivitsy ao amin'ny anthology. "I Johnny Got His Gun" dia miverina amin'ny endriny ary vao haingana dia nampiasaina tamin'ny hetsi-panoherana ny fidiran'ny Amerikana tao Iraka sy tany Afghanistan.
Top Irlandey, Scottish & Welsh Artists of the '80s
Ny boky tsara indrindra politika
Famoronana tantara mistery malaza
Tahaka an'i Jodi Picoult? Andramo ireto boky ireto
Boky tsara indrindra momba ny ankizy momba ny Lalao Olaimpika
Ny endri-tsoratra tsara indrindra amin'ny The Hobbit ho an'ny tanora
Top '80s Solo Songs avy amin'ny mpikambana ao amin'ny The Eagles
Top Supergroups ny '80s
Top '80s Songs of All-Female' 80s Rock Band The Bangles
Famaritana tsy ampy amin'ny fiteny malagasy Zavatra tsy ampy / fanononana X-SAMPA tsy ampy amin'ny teny frantsay
Ny dikan'ny endriky ny labozia amin'ny jodaisma
Ny Turkish Airlines misokatra amin'ny Tour de France
Ahoana no nahatonga ny Critics avy amin'ny hetsi-panoheram-pirenena nataon'ny Colin Kaepernick
Ny vavaka rehetra momba ny fivavahana katolika
Fampidirana amin'ny teny frantsay
Inona no atao hoe SUP (Paddleboard?)?
Hitady ny saka tsara indrindra ho an'ny andro firavoravoana
Famaritana int tao amin'ny C, C ++ ary C #
Minimalism na Minimal Art Mid-1960s hatramin'izao
Famaritana ny fanabeazana tsy tapaka
Ny fiainana ara-pihetseham-po amin'ny biby
Ny vehivavy tsirairay izay nahazo an'i Olympia nandritra ny taona maro
Georgia Douglas Johnson: mpanoratra Harlem Renaissance
Decorum ao Rhetoric
Inona no atao hoe rano mangatsiaka?
PGA Tour Dell Technologies
Top 12 tsara indrindra ny lalao ady amin'ny PC